ကင်ဆာရောဂါဆေးခန်း - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
နေ့စဉ် (တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်) - ၀၇:၀၀ - ၂၃:၀၀
၆၆ (၀) ၂၇၁၁-၈၄၈၀
Samitivej Sukhumvit ဆေးရုံကြီးရဲ့ ကင်ဆာရောဂါဆေးခန်းဟာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ကင်ဆာရောဂါ ကုသစောင့်ရှောက်မှု အစီအစဉ်များကို တ်သမတ်သော အဆင့်အမြင့်ဆုံး နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနဲ့ ပံ့ပိုးပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူနာတစ်ယောက်ဆီကို အပြည့်အဝပြန်လည် ကျန်းမာလာစေဖို့ အကောင်းဆုံး အခွင့်အရေးတွေပေးဖို့အတွက် ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုတွေကတဆင့် ရောဂါကို စောလျှင်စွာသိရှိဖို့ ကျွန်တော်တို့ အဓိကထားပါတယ်။
Samitivej Sukhumvit ဆေးရုံကြီးက ကင်ဆာရောဂါဆေးခန်းဟာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ကင်ဆာရောဂါ ကုသစောင့်ရှောက်မှု အစီအစဉ်များကို တသမတ်သော အဆင့်အမြင့်ဆုံး နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနဲ့ ပံ့ပိုးပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူနာတစ်ယောက်ဆီကို အပြည့်အဝပြန်လည် ကျန်းမာလာစေဖို့ အကောင်းဆုံး အခွင့်အရေးတွေပေးဖို့အတွက် ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုတွေကတဆင့် ရောဂါကို စောလျှင်စွာသိရှိဖို့ ကျွန်တော်တို့ အဓိကထားပါတယ်။ ခွဲစိတ်ကုသခြင်း၊ အိုင်အိုဒင်းကုထုံး၊ သွေးနှင့်ဆိုင်သော ရောဂါများကုသခြင်း၊ ဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ခြင်း၊ ရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုးခြင်းများနဲ့ ဓါတုကုထုံးများအပါအဝင် အမျိုးမျိုးသော အထူးကုသမှုနည်းတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကုသပေးနေပါတယ်။ ကုသနေစဉ်မှာ လူနာတစ်ယောက်စီရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာ ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ ပင်ပန်းမှုတွေကို လျော့ချဖို့အတွက် သက်သာစေတဲ့ နည်းလမ်းတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ အလေးထား ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူနာတွေ ပုံမှန်ဘဝကို ပြန်ရောက်ဖို့ ပြန်လည်ထူထောင်ပေးခြင်းနဲ့ အကူအညီများပေးခြင်းအားဖြင့် ပြန်လည်ကျန်းမာလာတဲ့အထိ ကျွန်တော်တို့ ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးပါတယ်။ ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးတဲ့ ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အပြင် ရင်သားကင်ဆာလူနာများ ခွဲစိတ်ကုသပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ရင်သား အစားထိုးတပ်ဆင်ခြင်းကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
ကင်ဆာရောဂါဟာ ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ ထင်ကောင်းထင်ရပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကင်ဆာရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ၊ ဓါတ်မှန်ဆရာဝန်ကြီးများ၊ ရူပဗေဒပညာရှင်များ၊ နည်းပညာရှင်များနဲ့ အထူးလေ့ကျင့်ထားတဲ့ ကင်ဆာရောဂါဆိုင်ရာ သူနာပြုများအပြင် သွေးပြန်ကြောအတွင်းဆိုင်ရာ သူနာပြုများပါဝင်တဲ့ သီးသန့် ဆေးအဖွဲ့ဟာ လူနာတွေ ကင်ဆာရောဂါကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့ ကူညီပေးဖို့ အသင့်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ပါရမီအရှိဆုံး ဆေးပညာဝန်ထမ်းတွေကို ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ရှိနေအောင် ဆွဲဆောင်ထားပြီး သူတို့တစ်ဦးစီက သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်မှာ ကုံလုံကြွယ်ဝတဲ့ ပညာရှင်အတွေ့အကြုံတွေ ယူဆောင်လာပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဆင့်မြင့် ကင်ဆာရောဂါဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့ ခေတ်မီအဆောက်အဦးတွေနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘာသာစကားပေါင်းစုံကို ပြောဆိုနိုင်တဲ့အဖွဲ့ဟာ Samitivej ကို JCI အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နဲ့ အရည်အသွေးမြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးတယ်ဆိုတဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးကအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ ဂုဏ်သတင်းတို့ရစေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲက တစ်ပိုင်းပါ။
အသားစယူစစ်ဆေးခြင်း နှင့် ဓါတ်ခွဲဆန်းစစ်ခြင်း
လူနာများနဲ့ ဆွေမျိုးများအတွက် စိတ်ပညာဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှု
သိုက်ရွိုက်ကင်ဆာအတွက် I-131 ဖြတ်ထုတ်ကုသခြင်း
ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း အစားထိုးခြင်း ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးအကြံပေးခြင်း
ပြင်ပသွေးပြန်ကြော ပြွန်ထည့်ကုသခြင်းနှင့် ဗဟိုသွေးပြန်ကြော ပြွန်ထည့်ကုသခြင်း
စိတ်ခံစားမှုနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များ
အရေပြားအောက်ရှိ သွေးကြောတုများအတွက် စောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာများနဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာများ
ပြင်ပလူနာ ဓါတုကုထုံး ကုသခန်း
ကင်ဆာလူနာများအတွက် အထူး ပြင်ပလူနာ စမ်းသပ်ခန်း
အတွင်းလူနာ ဓါတုကုထုံး ကုသခန်း
ကူးဆက်ရောဂါများပြန့်ပွားမှုကို ကာကွယ်ရန် ဖိအာမြင့်အခန်း
နေ့စဉ် (တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်) - ၀၈:၀၀ - ၁၆:၀၀
၆၆ (၀) ၂၃၇၈-၉၀၀၀
နေ့စဉ် (တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်)
၆၆ (၀) ၃၈၃၂-၀၃၀၀ လိုင်းခွဲ ၁၄၂၃ -၄
Sacarin Bunbanjerdsuk, M.D.
Prakasit Chirappapha, M.D.
Wiwat Talkijkul, M.D.
Watcharee Chompubud, M.D.